Fetin’ny Paska: tsy niaka-bidy ny atody | NewsMada
Par Taratra sur 19/04/2019
Ho an-dry zareo tandrefana, azo lazaina ho mariky ny fetin’ny Paska ny atody ary misy mihitsy ny kilalao mahakasika izany, fanao rehefa tahaka izao. Ho antsika eto Madagasikara kosa, matetika, tsy afa-misaraka amin’ny fety rehetra ny atody, ilay akora fototra hanamboarana maionezy na ahandroana ho anisan’ny sakafo fanokafam-bavony.
Noho izany, miakatra hatrany ny vidin’ny atody, roa na herinandro mialoha ny fety. Tsy toy izany kosa ny tsikaritra amin’izao andro vitsy mialoha ny Paska izao. Eny amin’ny mpaninjara na mpivarotra enta-madinika, manodidina ny 450 Ar hatramin’ny 600 Ar ny atody iray, arakaraka ny habeny.
Raha ny fanazavan’ny mpiompy, anton’izany ny fahamaroan’ny tolotra no ho ny tinady. Nihamaro mantsy ny olona niditra eo amin’ny sehatry ny fiompiana akoho manatody lava, raha mitaha ny tamin’ny taon-dasa. Noho izany, nitobaka ny vokatra kanefa ny mpanjifa, tsy nitombo isa firy.
Etsy ankilan’izay anefa, nisondrotra be ny vidin’ny provandy, indrindra, tamin’iny faramparan’ny taona hatramin’ny fiandohan’ny marsa teo, noho ny tsy mbola fiakaran’ny katsaka. Araka ny nambaran’ny mpiompy iray hatrany, niaina tao anatin’ny fatiantoka izy ireo noho ireo tranga rehetra ireo.
Marihina fa, any amin’ny mpiompy, manomboka amin’ny 250 Ar ny vidin’ny atody iray andraisan’ny mpamongady, etsy Antohomadinika. Mpanelanelana no mandray ny entana eo ary izy ireo indray, avy eo, no mitsinjara any amin’ny mpivarotra enta-madinika any.